Imikhiqizo Yokubonisa Imicimbi | I-China Umcimbi Wokubonisa Imikhiqizo Abenzi nabaphakeli
Yelula Ithebula Amakhava
Yelula Ithebula Amakhava nge-O ...
Ukuqina Kwentambo Yezindwangu Eqondile
Isikhala sokuphrinta esivelele sikuvumela ukuthi uthokozele ukuvezwa komkhiqizo ngobukhulu. Isibonisi sendwangu yokungezwani esinemidwebo eyingqayizivele siyabonakala impela phakathi kwesixuku.
Uma kuqhathaniswa nezembozo zethebula elijwayelekile, ikhava yetafula eyindilinga ibukeka ihlanzekile. Okubaluleke kakhulu, ikhava letafula eliyindilinga lilingana kahle nosayizi wetafula lakho. Iphelele ngezikhathi ezahlukahlukene, noma ngabe kungumbukiso wezohwebo, iphathi noma umkhankaso webhizinisi, amatafula anezembozo zetafula eliyindilinga elifaneleke kahle angakuhlaba umxhwele.
Itopper yetafula eliyindilinga liyisinqumo esihle sokwenza itafula lakho lomcimbi libukeke licijile futhi lihle. Futhi, ingasetshenziselwa ukuvikela itafula lakho phezulu ekugqashukeni kwansuku zonke, ikakhulukazi ukuhambela emuva naphambili emicimbini nasemibonisweni yezohwebo.
Ukuza nosayizi ohlukahlukene, okokufaka itafula lokwelula ngokwezifiso kuyindlela engabizi kakhulu yokwenza isibonisi setafula esikhangayo.
Ikhava yetafula elungiselelwe yakudala ingenye yamathuluzi okuphromotha asetshenziswa kakhulu emibonisweni yezohwebo, ekubonisweni noma emibukisweni. Qashelwa ngezembozo zetafula ezifakwe ngokwezifiso! Ungaxhumanisa isibonisi sakho nesembozo setafula esiphrintiwe ngomphumela oqinile wokubuka ozoxhuma amaklayenti angaba khona futhi uwajabulise.
Amakhava Wetafula Eliguqulwayo
Isembozo setafula esiguqukayo noma esiguquguqukayo silungele imicimbi ehlukahlukene yokumaketha, imibukiso, imibukiso yezohwebo nokuningi. Ngesembozo setafula elihle eliguqukayo, uzothola izixazululo ezimbili ezihlukile zokuphromotha, njengoba itafula lethu liphonsa kungeke kuguqulwe kuphela kusuka ku-8ft cast kuya ku-6ft cast kodwa futhi kusuka ku-8ft cast kuya ku-6ft cover.
Itende lombhede, elibizwa nangokuthi imarquee ne-gazebo, iyithuluzi lokuphromotha elisetshenziswa kakhulu. Okufaka usayizi omkhulu wokuphrinta nemidwebo yangokwezifiso, ukukhangisa kwamatende amathebhu kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokukwenza ugqame esixukwini, noma ngabe kusetshenziselwa imicimbi yasendlini nemisebenzi yangaphandle, njengemibukiso yezohwebo, amaqembu, imicimbi yezemidlalo noma imicimbi yezentengiso yangaphandle.
Ifakwe ifreyimu yetende esezingeni eliphakeme, amatende wethu wokukhangisa angaqinisekisa ukuzinza noma kwesinye isimo sezulu esincane esinomoya. Iphelele kuzo zonke izinhlobo zokusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle, noma ngabe ngumbukiso wezohwebo, umbukiso, umcimbi wezemidlalo noma ukwethulwa okusha komkhiqizo. Ngaphandle kwalokho, isikhwama samasondo esenzelwe ngokukhethekile senza ikiti yetende ibe lula ukuhamba ngayo.